Kazan kuyinto zamasiko, zomnotho kanye senkolo kubalulekile, hhayi kuphela esifundeni kodwa kulo lonke izwe. Yini ukubona e Kazan ngo-September nango indlela yokugqoka, ukuqagela sezulu, uma uza Kazan ngoSepthemba? On the ezikhangayo esemqoka yedolobha futhi mayelana nalokho esiyokwenza enhlokodolobha yase Tatarstan ekwindla, sizoqhubeka.
Kuyinto inhloko-dolobha Tatarstan, okuyinto unemisebenzi izizathu yokuziqhenya. Lo muzi has isimo endaweni, okuyinto iphatha Umhlaba Summer Universiade. Ngaphezu kwalokho, kuyinto indawo ubuqhawe ezweni amanzi ezemidlalo, kodwa futhi abasubathi Kazan futhi baziwa. ezikhumbuzo Okubalulekile zomlando nezamasiko ingatholakala kwi-UNESCO uhlu. Kazan ayidingi ukukhangisa, ngoba ngakho kuyacaca ukuthi kukhona into ukubona. Cishe ngemva ukwakha esifundeni (yeRiphabhuliki yaseTatarstan) e Kazan babe kwentuthuko enkulu emkhakheni wezokuvakasha. Kuze kube manje, inhloko-dolobha ye-republic minyaka evakashela abantu abangaphezu kwesigidi.
Uma ufika e Kazan ngo-September, okokuqala, zama ukubheka isakhiwo sendawo "ezibiyele", kanye mosque zendawo, waqaphela yaseYurophu ngobukhulu. Futhi, muzi ezinye ezikhangayo, ezifana nombhoshongo ophakeme ngokuthi "Syuyumbike". Emaphethelweni Kazan izindawo edumile hhayi ngaphansi ezithakazelisayo. Ngo sezulu esihle, ungakwazi ukuhlola edolobheni nge izizinda eside. Lokhu arcade kwenziwa entwasahlobo sekwephuzile, ihlobo kwekwindla, ngakho kufanele ukuza Kazan ngo-September.
Isimo sezulu ngo-September
Uma ufuna ukuthenga izinto ofuna ukuzenza e Kazan ngo-September, alungele kubanda kakade ezinsukwini zokuqala. Ngaphezu kwalokho, ungalindela ngisho frost kancane. Njengomthetho, idolobha ekwindla eyodwa kuphela ngesonto ecacile futhi izinsuku ezimbalwa imvula. Futhi ngo-September, ungalindela ezingeni lelisetulu umswakama emoyeni (amaphesenti angu-70).
Izinto okumele uzenze ekwindla?
Vele ambalwa ukusuka edolobheni emahlathini lezihlahla kanye coniferous, lapho umoya ohlanzekile futhi elinamanzi ahlanzekile inikeza isimo ezolile, kukhona ukuzilibazisa izikhungo eziningi, lapho ungakwazi ukuchitha isikhathi sakho, uma uza Kazan ngo-September. Phakathi no-entwasahlobo isikhathi noma ezinsukwini yokuqala kwehlobo, futhi engxenyeni yokuqala isizini ukuwa kufanele kube ukubuyisela amandla zomzimba.
Kazan ngo-September nango kunoma iyiphi enye inyanga uzokunika izikhumbuzo zomlando ukuthi ukuheha abavakashi. Ngazo zonke izikhathi, yaseKazan - indawo nemibukiso kanye nemibukiso ezahlukene ukuthi izivakashi isithakazelo. Ngo-September, ungase futhi uvakashele inani elikhulu izenzakalo. Isenzakalo esidume kunazo zonke kubo - umkhosi cinema Muslim, lapho, naphezu ebusheni bakhe, wanquma ukukhulisa izimpikiswano ezinkulu ezihlobene inkolo futhi senkululeko yenkolo. Kungakhathaliseki ukuthi sibadala izenzakalo amancane kungenzeka ukuhlangabezana izinkanyezi eziningi ezweni noma emhlabeni jikelele. Amafilimu eziboniswa kulesi sikhathi, uzokwazi ukubona yaseshashalazini yedolobha. Phakathi nale nkathi, Kazan - yindawo lapho kunzima ukuthola indiza, ngakho izinto kufanele ukuba ucabangisise kahle ngezinselele kusengaphambili.
Autumn - kungcono isizini kuqhathaniswa efudumele emzini, ngakho-ke ngeke kube sekupheleni kwesizini izivakashi. Shiya umcimbi ethandwa zabahamba zendawo wayevakashele Waltz umakoti, okuyinto eyenziwa minyaka yonke. Lokhu yilapho ungakwazi ukubheka esinye sezenzakalo amahle kakhulu futhi umbukwane konyaka. Uzokwazi ukukhetha ehhotela kuye okuthandayo - engxenyeni zomlando Kazan noma emaphethelweni ethule, lapho kuyoba etholakalayo eziyinxanxathela nezokuthutha.
Sinjani isimo ejabulile ye-athomu
"Stoloto": impendulo mayelana nendlela ukukhetha ilotho